DHAGEYSI XASAASI AH: Dhawaaqa Koonfur Galbeed ee dalbashada Doorasho ku timaada Habka 4.5 Bilowga qorshaha Qarsoon.
MUQDISHO(P-TIMES) – Madaxda dawladda Faderaalka ee Soomaaliya ayaa xooga saaraya isku duba ridka qorshaha doorashooyinka dalka ee ay tahay in la qabto ka hor 2021-ka, waxaana qorshahaas bilowgiisa hadda waday Ra`iisulwasaaraha Soomaaliya Xassan Cali Kheyre, iyadoo aad looga shaqeynayo arrimaha ku wajahan tubaha Qaranka.
Odayaasha dhaqanka ee Koonfur Galbeed shir ay maanta ku qabteen magaalada Baydhabo, 2 maalin ka dib markii uu soo moog-yahay Raysalwasaaraha Soomaaliya, waxay daaha ka rogeen in aysan diyaar aheyn doorasho qof kasta codkiisa dhiibto.
In la qabto doorasho qof kasta codkiisa dhiibto Soomaaliya waqtigan su`aalo badan ayaa dulhoganaya, waxaana dad badan ay saadaalinayaan in aan laga maarmin doonin in dib loogu laabto hanaanka soo xulida xildhibaanada.
Odayaasha dhaqanka ayaa sheegay in ay u diyaarsan yihiin hanaanka awood qeybsiga beelaha ee 4.5, uuna yahay kaas midka saxda ah ee waqtigan looga gudbin karro dalka marxaladdan.
Dhawaaqa Baydhabo, waxaa la rumeysan yahay in uu bar bilow u yahay dhawaaqyo badan oo ka imaan doona deegaanada dalka, kuwaas oo ku wajahan doorasho in la qabto, waxaana siyaasiin badan ay xooga saarayaan in la helo waqtiga doorashada oo aan lagu xadgudbin, wixii ka dambeeyana ay tahay in laga wada hadlo qaabak hirgalinteda.
3dii April 2016-kii ayay Puntland iyo dawladda Faderaalka heshiis ku gaareen in aan dib loo soo celin hanaanka doorashada ee kusaleysan nidaamka 4.5, balse hadda qorshaha cusub ayaa u muuqda taabagalinta arrimahaas oo ay gadaal ka riixayaan qaar kamid ah madaxda dawlad gobaleeydada dalka.